Ndingayenza njani imali ngePinterest? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ndingayenza njani imali ngePinterest?
Meyi 10, 2021 0 IiCententarios 366
Iinethiwekhi zentlalo kunye namaqonga onxibelelwano anezinto ezininzi ezenzelwe abantu abaphakathi kwamaqela omsebenzi. Ngale ndlela, ukuba umsebenzi obalaseleyo wenziwa kuzo, kunokwenzeka ukufumana inzuzo kwezoqoqosho Unokuba yingeniso yeveki, yenyanga kunye neyonyaka yomntu ngamnye.
Kubantu abazibuza, ukuba kunokwenzeka ukufumana imali enkosi kwiPinterest kodwa njengazo zonke iinethiwekhi kunye nehlabathi le-Intanethi, kufuneka ulandele uthotho lwezikhokelo. Ngezi ntlobo zamanyathelo, abaphathi besicelo banokugubungela imiqolo yabo ukubonelela ngokhuseleko kubasebenzisi.
Umsebenzi ngamnye ophakathi kweli qonga kufuneka uqinisekiswe ngabo babini banomdla. Ukuba kukhona enye ingxaki ungaphulukana nokubala kwaye uyeke nokuba ngumntu Isalathiso kumaqonga ngokwawo.
Izibonelelo zokusebenza kunye nePinterest
Nangona ingengomsebenzi oqhelekileyo, kunokwenzeka ukuba ubonge imali kubukrelekrele babavelisi bomxholo. Iya kubaluleke kakhulu kuphela into yokuba zonke izinto eziveliswe ngabantu abanqwenela ukuzenza sebenzisana neenkampani ezinkulu kunye nabashukumisayo.
Ukwamkelwa okuphezulu kwiPinterest
Ukuba amanye amaqhekeza enziwe ngumntu athabatha umzuzu wolwazi kwiqonga ngokwalo, kunokwenzeka ukuba upapasho lwabo luza kuqala ukubonwa ngaphakathi kwisiza.
Ingeniso yenyanga kwiPinterest
Elinye inqaku elincamisayo kukuba kuyakubakho isahlulo esiphezulu sengeniso ngaphakathi kwesixhobo ngokwaso, kuya kufuneka kuphela ukuba wenze konke ngokuchanekileyo ukugqiba lo msebenzi. Ukwenza iirhafu, unxibelelwano luyimfuneko Inxalenye nepasela, oku ukunqanda iingxaki.
Izinketho zokwenza imali ngePinterest
Enye yezona zinto zibalulekileyo ngexesha lomsebenzi kwiPinterest kukwazi ukukhupha bonke ubuchule abantu abanabo. Ngale ndlela, umntu akanako ukusilela ukukhankanya iimeko ezahlukeneyo ze yenza imali ngaphakathi kweqonga.
Umanyaniso lokuThengisa kwiPinterest
Olu hlobo lothethathethwano luyakwenziwa ukukhuthaza iimveliso zomntu wesithathu kwaye ngexesha intengiso iqala ukusebenza, umntu angafumana ikhomishini ukongeza kwintlawulo yeenkonzo zabo.
Ingeniso evela kwezi ntlobo zemisebenzi inokuba ngama-200 eedola ngenyangaNangona kunjalo, kukho abasebenzisi abafumana ubuncinci i- $ 1000 ngomsebenzi wabo.
Izikhonkwane ezixhasiweyo kwiPinterest
Olunye ukhetho kwabo bathanda yonke into malunga nehlabathi ledijithali kukufumana Ukusebenzisana kunye / okanye nabaxhasi. Kakhulu ngumzuzu osebenzayo kwabo bantu bachitha imini nobusuku bephucula yonke into ngokubhekisele kwiprofayili yabo yenethiwekhi.
Phinda uthumele kwiwebhusayithi yakho kwiPinterest
Ukuze uqhubeke nokufumana izibonelelo ngaphakathi kwento efunekayo, kunokwenzeka ukuba kwizikhonkwane zePinterest ubeka ikhonkco eliya kwiwebhusayithi yakho. Ukusuka apho amakhulukhulu abasebenzisi angajonga wonke umxholo kwaye khulisa utyelelo osele unalo ngaphakathi ukusuka ngokufanayo.
Lithuba elihle eliya kuthi livumele abantu ukuba bafumane i-100% yenzuzo ngelixa bekhula kabini kwi-Intanethi.
1 Izibonelelo zokusebenza kunye nePinterest
1.1 Ukwamkelwa okuphezulu kwiPinterest
1.2 Ingeniso yenyanga kwiPinterest
2 Izinketho zokwenza imali ngePinterest
2.1 Umanyaniso lokuThengisa kwiPinterest
2.2 Izikhonkwane ezixhasiweyo kwiPinterest
2.3 Phinda uthumele kwiwebhusayithi yakho kwiPinterest
Uyenza njani imali ngeYouTube?